Jawaabta CC Shakuur ee faalladii Fahad Yaasiin | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Jawaabta CC Shakuur ee faalladii Fahad Yaasiin
Jawaabta CC Shakuur ee faalladii Fahad Yaasiin
Muqdisho (Dalkaan.com) – Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ahna musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya ayaa ka jawaabay faalladii Fahad Yaasiin, Agaasimihii hore ee Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka, haatanna ah La-taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday.
Hoos ka aqriso qoraalka Cabdiraxmaan oo dhameystiran:
Shaqada sirdoonka laga rabo waxay ku xiran tahay aragtida xukun ee la doonayo. Haddii xukun kalitalis ah laga hadlayo awoodda, hantida, tamarta iyo waqtiga waxaa la gelinayaa amniga kalitaliska.
Sirdoonku wuxuu ka shaqaynayaa basaasidda, baacsiga iyo sumcad dilka mucaaradka, cabsi ku haynta kuwa daacada u ah rajiimka, shirqool iyo khaarijin, shaki kala gelinta bulshada, jahwareerinta iyo jihaynta ra’yiga dadwaynaha si loo jeclaysiiyo rajiimka, loogana raarido in la’aantii dalku dumayo.
Haddiise xukunku dimoqoraadi yahay, sirdoonku wuxuu qayb ka yahay ilaalinta iyo difaaca Amniga Qaranka oo ay ugu horrayso amniga muwaadinka, jiritaanka hay’adaha dawladda, dhaqaalaha dalka, amniga tamarta, cuntada, bay’ada, tiknoolajiyada, iwm. Xukuumadda ayaa dejisa, fulisana qorshaha amniga qaranka. Baarlamaanka ayaa leh korjeegtaynta iyo la xisaabtanka hay’adaha amniga. Sirdoonkuna wuxuu hoos yimaadaa Wasaaradda ku shaqa leh ee madaxweyne ama Raysalwasaare midkoodna ma hoos tago.
Qoraalka taliyihii hore ee nabadsugidda marna xukuumadda iyo Baarlamaan laguma soo hadal qaadin. Dawlad Goboleed warkeeda daa. Wuxuu sheegay in qorshaha Madaxweynaha lagu hagayey sirdoonka, in uu isagu rafiiq (wehel) u ahaa, halbeega guushana welwelka farxada Madaxweynaha ayuu ka dhigay.
Wuxuu kaloo imtixaan uu kaligiis qaaday natiijo 100% siiyey shaqadiisa oo xitaa gaabis, guuldaro ama tabar yari ma sheegin. Qoraalku wuxuu marag fur u yahay xantii ahayd in talada dalka ay labadooda ku koobnayd.
Waxaa marag ma doonta in shantii sano ee la soo dhafaay awooddii iyo dadaalkii ugu badnaa ee Hay’adda NISA lagu bixiyey dagaalka siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo ku duulka dawlad Goboleedyada (DG) ka aragtida duwan rajiimka Farmaajo, taasoo fursad wayn siisay in argagexisada Alshabaab (AS) ay canshuur iyo baad maalin cad Shacabka ka gurtaan.
Waxay canshuur ka qaadaan meheradaha ganacsiga, dekedda, garoonka diyaaradaha, suuqa bakaaraha, dhulka la kala iibsado, NGOs. Shacabkii waxay naf bideen in kuwii qarxinayey garsoor u doontaan. Qabiilladii ayey u sameeyeen, waxay ugu yeereen naqiib, kaasoo qabiilka wakiil uga ah Al shabaab. Maadaama ay si dadban Muqdisho u xukumaan, AS waxay qaraxyadii ku soo koobeen kuwo farriin ku kooban oo ah; weli waa jirnaa, qatarna waa ku nahay ciddi damacda in ay canshuurta ama baadda bixin weyso?
Maadaama uu Taliyihii hore caddeeyey in qorshaha NISA lagu hagayey uu Madaxweyne hore Farmaajo lahaa waxaa cad in uu isagu lahaa amarkii iyo qorshihii
1- Itoobiya loogu dhiibay Qalbidhagax.
2- Weerarkii ay NISA ku qaaday xarunta Xisbiga Wadajir.
3- Weerarradii lagu qaaday Hoteelkii ay labada Madaxweyne iyo Gudoomiyihii hore ee Baarlamaan deganaayeen.
4- Weerarkii Mukhtaar Rooble lagu soo afduubay
5- Shacabkii iyo madax kale oo iyagoo dibadbaxaya la weeraray.
6- Awooddii ciidan ee guddoomiyihii Baarlamaanka xilka looga tuuray, kii kalana lagu madiidiyey.
7- Wiilashii Soomaaliyeed ee lagu soo xero geliyey in Qatar loo qaadayo, ka dibna dagaalka Tigreega lagu guray
8- Dilkii Ikraan Tahliil iyo is hortaagii caddaalad u raadinteeda.
9- Isku daygii Raysalwasaare Rooble lagu afganbi rabay.
10- Isku daygii Madaxweynaha Jubbaland lagu soo qafaalan rabay, iyadoo kumaandoos dawlad kale la adeegsanayo.
Kalsooni darrida shacabka ay NISA ka qabaan waxay keentay in ay labada talis ee AS iyo NISA la kala garan waayo, halhayskii KALA MAAN oo ka tarjumaya guuxa jirana uu ahaa “shaki malaha inay laba shabaab wada shaqeeyaane”
Maxaad ku falaysaa Guddoomiye Degmo oo hadaf muuqda Alshabaab u ah, adigoo heli kara in aad ku shaqayso nabadsugid dharcad ah oo toos ugu xiran taliye cid walba ka sarreeya, haystana awood iyo hanti aan la xisaabinaynin.
Falsafada waxaa ka mid ah solipsism oo ah waxa adiga maskaxdaada ku jira ayaa xaqiiqa ah, cid kale waxba kaama quseeyaan. Waxay la mid tahay in uu ruux ku doodo “ Sanadkaas ayaa ah kii Soomaaliya ugu fiicnaa maxaa yeelay asaga lee og sababta.
Mar haddii wixii maskaxdaada ku jira oo keli ah sax yihiin waxaad ku dhacdaa in aad dadka kale caqligooda ku xadgudubto oo aan tiraahdo
“Dal aan 30 sano ka hor tababari jirnay, soddonkii aan burbursanayn isagu dawlad ahaa, ayaa weli tababar noo soo doonanaya”
Waxaad kaloo oran kartaa
“Soomaaliya waxay leedahay sirdoonka ugu fiican Afrika, oo ay wiil iyo hooyadiis u wada shaqeeyaan, laakiin caasimada ugu amaanka xun ayaa xarun u ah”
Waxaad kaloo dhihi kartaa
“ Soomaaliya waxay lahayd Madaxweyne wadani ah, ciidanka Afrika ugu xooga badan, iyo sirdoonka ugu khatarsan aduunka, haddana dalkii burburo way ka celin waayeen”. Waxay la mid tahay adoo yiri “ ardayga ugu fiican waxbarashada Iskuulka ayaan ahay, laakiin Imtixaankii waan ku dhacay , sababtoo ah macalimiinta ayaa i neceb nooh” Soomaaliyana shirqool shisheeye ahaa dumiyey.
Koleey qoraalku kama marna dacaayad olole ee Farmaajo iyo ha la i xusuusto. Mar haddii adigoo dadka loogu hadalhaynta badan yahay ah, lehna saamayn wayn, mar qura burjigaagu jabo, aadna wayso cid warkaada haysa, waxaa kugu dhacaya cudur la yiraahdo “Is waayid”. Waxaadna ku qasban tahay in aad isi soo muujiso oo aad hawshadii hore ku laabato.
Qubuuro ku yaalla Muqdisho oo meydadkii ay banaanka usoo baxeen iyo halis ka taagan
Xabaale ku yaal Muqdisho oo meydadkii ay banaanka usoo baxeen iyo halis ka taagan
DEG DEG: Fanaanadii Khadra Daahir Cige oo caawa geeriyootay
Fanaanad Khadra Daahir Cige oo geeriyootay – Dhageyso wareysi laga qaaday 1976
Xog: Madaxweyne Xasan oo berri u baxaya safar dibadda ah
FANAANKA ILKACASE QAYS YAA SIXRAY, WARAYSI ?
Kenya oo shidaal qodis ka billowday dhul-badeedkii loo xukmiyey SOOMAALIYA
Deg deg Ujeedada Loo Saarayo Amisom oo La Kashifay, Farmaajo oo...
”KHILAAFKA DANI & WASIIR JAMAAL MUXUU SALKA KU HAYAA”?
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Caawa Oo Axad...
Sawirro: ROOBLE oo war cusub kasoo saaray doorashooyinka ka socda dalka
QM oo go’aan kasoo saartay duulaanka Ruushka ee Ukraine
WARARKII UGU DANBEEYAY CAALAMKA I DAGAALKA RUUSHKA | UKRAINE
DF iyo IMF oo gaaray heshiis muhiim u ah deyn cafinta...